Vahaolana amin'ny olan'ny fametrahana rindranasa 32-bit ao amin'ny Linux Mint 14 RC 64-bit | Avy amin'ny Linux
Vahaolana amin'ny olan'ny fametrahana fampiharana 32-bit ao amin'ny Linux Mint 14 RC 64-bit
Vao nandefa ny vaovao efa fantatro aho Linux Mint 14 RC misy, ary Clem vao nanambara fa ao amin'ny kinova 64-bit dia misy olana izay tsy mamela ny fametrahana rindranasa toa ny Skype, Google Earth na fonosana 32-bit hafa.
Ny fahaizana mametraka rindranasa 32-bit amin'ny tontolo 64-bit dia matetika antsoina hoe "Multiarch". Toa nisy fiovana tamin'ny dpkg ao Debian, izay nanao ny fikirakirana Multiarch lasa lany andro ao Ubuntu. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba an'ity olana ity ianao eto: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ia32-libs/+bug/1016294
Mba hahafahan'ny Multiarch, sokafy terminal ary soraty ireto baiko manaraka ireto:
Ity olana ity dia hamboarina am-tanana ao amin'ny kinova miovaova an'ny Linux Mint 14.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Vahaolana amin'ny olan'ny fametrahana fampiharana 32-bit ao amin'ny Linux Mint 14 RC 64-bit
@MonitoLinux miasa betsaka loatra ny anao. Tsy azoko antoka fa ho hitako any amin'ireo seranam-piaramanidina maharitra. Saingy afaka manome toky aho fa any Sid, ary azo inoana fa amin'ny repo an'i Wheezy  dia ho hitanao fa misy izany.
Ny tohana multiarch dia zavatra izay nitabataba be. Nifandona taminy toy ny tamin'ny volana jona aho ary efa ela izy no nihodina.
monitolinux dia hoy izy:
@Willians dia avy amin'ny vanim-potoana taloha aho, izay tsy dia be loatra ny tahiry miaraka amin'ireo rindranasa ilain'ny iray, izay iray amin'ireo hitany indrindra dia ny kaody loharano.
Mamaly amin'ny monitolinux
Ity  lahatsoratra iray nataon'ny DD momba an'io lohahevitra io.
Ary ao amin'ny debian.org 
Somary very aho (vaaale betsaka) amin'ity. Mampiasa Xubuntu 12.10 64Bit (tifitra iray ampitahaina amin'ny ubuntu 12.10 izay leeeento) ary ny nahagaga ahy rehefa nandeha nametraka KompoZer aho dia tsy nipoitra ... tamin'ny farany dia notsoahiko fa satria tsy nisy izany ho an'ny 64bit dia dia tsy tao amin'ny trano fitahirizana ... na dia mandraka ankehitriny aza dia nametraka foana (miaraka amin'ny apt-get install Kompozer) fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy hita. Rehefa avy nieritreritra be aho dia nahita DeB 64 kely ary nametraka azy. Saingy ny fisalasalako ary farany tonga eo amin'ilay hevitra. Raha apetrako ity hevitrao momba ity lahatsoratra ity. Hisy fonosana 32bit hiseho ao amin'ny fitoeram-bokatra hametrahana programa 32bit raha tsy misy 64bit? Ho niseho ho ahy hametraka ao amin'ny trano fitahirizana ve ilay Kompozer 32-bit? Tsara ve ny anaovako azy amin'ny programa ilaiko amin'ny ho avy?
elav nolazaiko anao, tsy izany no nahatonga ahy tany Debian sid
raha ny marina ity olana atolotry ny mint ity dia efa natolotr'i Debian sid teo amin'ny 2 volana lasa izay, na dia amin'ny synaptic aza dia milaza fa alohan'ny hametrahana azy32-libs sy ia32-libs-gtk, dia mamporisika anao ny hanampy dpkg –add-architecture: i386 avy eo mihazakazaka fanavaozana ary vonona.
Oviana ianao no nilaza tamiko? Tsy tadidiko 😛
2 volana lasa izay, rehefa nanana olana nitovy aho nefa dia satria efa lany andro ilay fonosana ia32-libs-gtk, ary mbola tsy nivoaka hamitana ireo ia32-lib vaovao izy io, mandra-pahatsiarovako ny nolazainao sy ny antony handehanako hanampiana dpkg -add- maritrano: i386 😛
Hahaha izany dia tamin'ny alàlan'ny IRC, sa tsy izany?
ny vahaolana dia ny misintona ny kaody loharano ary manangona, avy eo mamokatra ny fonosana deb ary omeo ny vondrom-piarahamonina
Valio amin'ny MonitoLinux
Tena tsara! Mahaliana…
Enga anie izy ireo handamina ny olana alohan'ny mivoaka ny kinova farany.
Nametraka linux mint 14 64 bits aho ary tsy nanana olana tamin'ny fametrahana Skype, ny version 4.0 ihany no napetraka
Ho hitako hoe inona koa no olako
Ny mpamily NVIDIA GeForce R310 dia mampitombo ny asany amin'ny Linux
Linux Mint 14 "Nadia" RC misy